musha Europe MotoGP Vatasvi Valentino Rossi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeItaly nyanzvi mota mudhudhudhu mujaho anozivikanwa se “Rossi". Yedu yeValentino Rossi Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ehe, munhu wese anoziva nezve ake akanakisa emidhudhudhu ekumhanya hunyanzvi. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveValentino Rossi's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Valentino Rossi Kurarama Kwepamberi uye Yemhuri Ngano:
Kutanga kubva, Valentino Rossi akaberekwa pazuva re16th raFebruary 1979 kuUrbino, kuMarche Italy. Ndiye wekutanga pavana vaviri vakazvarwa mumubatanidzwa pakati paamai vake, Stefania Rossi, uye baba vake, Graziano Rossi.
Nyika yeItaly yerudzi chena nemidzi yemuItaly haina kupedza nguva yakawanda panzvimbo yekuzvarwa kwake mhuri yake isati yatamira kuTavullia kwaakakurira pamwe chete nemunun'una wake Luca Marini nehanzvadzi yake Clara Rossi.
Kukura muTavullia, Rossi akatanga kufarira mujaho uye akatanga kuda kwakanyanya mutambo. Semwana, baba vaRossi vakamupa kart pane bhasikoro nekuda kwekuti iye naamai vaRossi vaive nehanya nekuchengetedzeka kwemwanakomana wavo.
Valentino Rossi Dzidzo Uye nebasa Kuvaka:
Kwete yakawanda nhau inozivikanwa nezve zvikoro zvakapinda Rossi. Panguva yaakange ave nemakore mashanu, baba vake vakatsiva kart yake 60cc mota ne 100cc mota, nekudaro, ichiwedzera kumhanya kwakanyanya kwekart.
Kutevera kukwidziridzwa kweinjini yekart yake, Rossi akaramba achidzidzira hunyanzvi hwekuchovha bhasikoro uye akaisa yakawanda yekuedza kuwana hunyanzvi hunyanzvi hwaaishuvira mumutambo wekumhanya.
Valentino Rossi Rokutanga Roupenyu Hupenyu:
Kuedza kwaRossi kwekuwana hunyanzvi mujaho wemudhudhudhu kwakamupinza mukutora mumakwikwi akasiyana. Mu1990, Rossi akapinda mumakwikwi emuno e kart iyo yaakaratidza kuhwina mumakwikwi.
Parakazosvika Rossi aine makore gumi nemaviri, akange ave nyanzvi munhangemutange yemhando. Senyanzvi, Rossi akahwina mibairo yakanaka kubva kumakwikwi akasiyana-siyana aakatora.
Valentino Rossi Road To Fame Nyaya:
Kuhwina mubairo wakawanda mumakwikwi e kart kwakapa Rossi chivimbo chakakwana muunyanzvi hwake uye zvakaita kuti atore chikamu mumakwikwi ehabhu emunyika ayo akaitirwa parma. Rossi akapedza kupedzisa chechishanu pakupera kwemakwikwi.
VERENGA Marc Marquez Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts
Nerubatsiro rwababa vaRossi neshamwari dzake dzekare dzekumhanya; Virgino Ferrari, Claudio Castiglioni, naClaudio Lusuardi, Rossi vakawana mukana wekukwira mudhudhudhu weCagiva Mito 125cc kuchikwata chake mumakwikwi eRussia emitambo yekugadzira. Mhedzisiro yekutora chikamu kwake mukutenderera kwekutanga kwemakwikwi hazvina kubuda sezvakange zvichitarisirwa chikonzero chekuti Rossi akakuvadza mudhudhudhu wake mutsva mukudonha rekutanga rekona uye akauya wepfumbamwe pakupera kwerondedzero yemakwikwi.
Valentino Rossi Rise Kuzivikanwa Nhau:
Kunyangwe kuita kwekutanga kwaRossi pamakwikwi eItaly emitambo yekugadzira kwaikurudzira, akashanda nesimba mumatanho akasara emakwikwi uye mumakwikwi ekupedzisira emwaka wa1994 kuMisano, Rossi akabuda akahwina mumakwikwi. Makore mashoma mushure mekukunda kwake kukuru muMisano, Rossi yakapihwa fekitori Mito naLusuardi.
Nekukurumidza kusvika kunguva yekunyora, Valentino Rossi ndiye mumwe wemibudiriro yemudhudhudhudhudhudhudhudhudhudhu nguva dzese ane yake yekupedzisira kubudirira kuve; achipedza wechipiri pamutambo wechitatu weMotoGP mujaho uyo wakaitirwa muAmerica. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Valentino Rossi Hukama Hupenyu:
Valentino Rossi achiri kungoroora panguva yekunyora. tinokuunzira chokwadi nezvenhoroondo yake yekufambidzana uye iye zvino hukama. Kutanga nenhoroondo yake yekufambidzana, Rossi akave akabatanidzwa kune vasiri pasi pevasikana vasere kubva pakutanga kwebasa rake.
Rossi aive nehukama hwake hwekutanga kufambidzana naMartina Stella mu2002 iyo yakagara kwemakore angangoita matatu. Akabatanidzwazve nehukama hwekudanana naMaddalena Corvaglia (2005), Ariana Matteuzzi (2005-2007), Linda Morselli (2007-2016), Elisabetta Canalis (2007), Mandala Tayde (2008) naAura Rolenzetti (2016).
Nezve rake iyezvino chimiro chehukama panguva yekunyora, Rossi ari kufambidzana neiyo lingerie modhi Francesca Sofia Novello uyo ari 15 makore ari mudiki pane iye. Idzo shiri mbiri dzerudo dzakatanga kusangana paMonza MotoGP, kuNorth Italy, uko Francesca aive musikana wekutevera uye vakatanga kudanana mugore re2017.
Rossi nemusikana wake Francesca parizvino vane zvirongwa zvekuroora panguva yekunyora.
Valentino Rossi Hupenyu hwemhuri:
Rossi inouya kubva kumusoro-kirasi yemhuri kumashure. Tinokuunzira chokwadi nezve hupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaRossi:
Graziano Rossi ndibaba vaValentino Rossi. Aive muItaly aimbova Grand Prix mudhudhudhu mugwagwa uye akazvarwa pazuva re14th raKurume 1954 muPesaro, Italy. Akatanga kumhanya mumakwikwi epasi rose mugore 1977, akatasva Suzuki mukirasi ye500cc. Akaita chinzvimbo chakakura mukubudirira kwaRossi uye kwakatanhamara nekutsigira mwanakomana wake mumutambo wekumhanya achiri mudiki kwazvo.
Nezve amai vaRossi:
Stefania Palma ndiamai vaRossi. anochengeterwa zvekuti aigaro tarisa mutambo wemwanakomana wake pachiratidziro pachinzvimbo chekuti azviwanire kunzvimbo yemakwikwi chero ani zvake anga achitora chikamu.
Stefania agara akaisa kuchengetedzeka kwemwanakomana wake sekutanga kwake uye anonzwa kutya zvakanyanya kumuona achikwikwidza kunzvimbo yemakwikwi.
Nezve hama dzaRossi:
Valentino Rossi ane vakoma vaviri; Luca Marini munun'una wake uye Clara Rossi munun'una wake.
Kunyangwe zvisiri zvakawanda zvinozivikanwa nezve munin'ina wake Clara, Rossi anogovera chisungo chakasimba nehanzvadzi yake sezvo vaviri ava vakaonekwa vachifara panguva dzinoverengeka. Rossi's-munin'ina-mukoma Luca zvakare muItaly mudhudhudhu mujaho uye akazvarwa pazuva re10th yaaugust 1997 muUrbino.
Kure kubva kumhuri yepedyo yaValentino Rossi, vanasekuru vake baba vaDario Rossi naDenise Pierantoni nepo zvishoma zvichizivikanwa nezvaambuya vake amai nasekuru. Hapana ruzivo rwakawanda rwunozivikanwa nezve maiguru vake nasekuru pamwe nababamunini vake.
Valentino Rossi Kurarama Kwemunhu:
Chii chinoita kuti Valentino Rossi akanganise? Gara kumashure apo isu tichikuunzira magadzirirwo ehunhu hwake kuitira kuti akubatsire iwe kuwana izere mufananidzo wake. Kutanga, Valentino Rossi's persona isanganiswa yeAcarius zodiac maitiro.
Rossi anochengeta hupenyu hwake hwepachivande asi asina chikonzero chekuisa pachigawe izvo zvaanoda kuita zvakanyanya. Chimwe chezvaanofarira uye zvekuzvivaraidza ndezvekuda kwake kirabhu yenhabvu yeItaly "Internazionale".
Valentino Rossi Mararamiro:
Valentino Rossi ine mari inofungidzirwa inosvika zviuru gumi nemazana mapfumbamwe emadhora panguva yekunyora. Kwaakabva hupfumi hwake kunobva zvakanyanya kubva mukumhanya-mhanya kwaanoedza kuita uye mari-shoma inobata neyemaorenzi ekunze kweJapan apo ongororo yemashandisiro ake maitiro inoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Kutanga nefuma yaRossi, akatenga imba iri muLondon, UK paakanga achiri muchibvumirano naHonda. Iye zvakare ane villa iyo inozivikanwa kwazvo kune ayo ezhizha kirabhu mapato pachitsuwa cheIbiza.
Rossi akatengawo Pershing 56 yacht yakasarudzika iri 18 mita kureba uye ine mabheriti matanhatu. Akaitumidza zita rekuti Titilla II mushure meyacht yake yekutanga - Titilla - iyo yaakatengesa asati atenga iyo Pershing 56 yacht yepamusoro. Nezve mota dzake, Rossi ane yeyero-yeruvara Ferrari 458 Italia iyo yaakapihwa kwaari nemufananidzo wemotokari mugadziri - Ferrari - mu2012 Uyezve, ane BMW M3 Sedan mumotokari yake.
Valentino Rossi Untold Chokwadi:
Kupedza nyaya yaValentino Rossi yehucheche uye biography pano pane zvisinga zivikanwe kana zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi iwe zvausina kumboziva nezvake.
Rossi akaberekerwa mumusha wechiKristu uye akakurira achitenda kuvapo kwaMwari. Iye anonamata Mwari mukereke yeRoman Catholic uye haatore hake kutenda kwake kwechiKristu.
Mujaho weMotoGP, kusiyana nemamwe majaja, ane mazita emazita matatu akasiyana panguva yekunyora. Ivo ndiRossifumi, Valentinik naChiremba. Rossi anga achishandisa "Chiremba" kubva panguva yake yegoridhe paanotonga 500cc kirasi. Zita rake remadunhurirwa - The Chiremba - aifungidzirwa kutonhodza kwake uye kupora kwechipatara kwevaimupikisa.
Iyo MotoGP mujaho sevamwe vanhu vese vanozivikanwa akapinza tattoo muchiuno. Iyo tattoo inova turtle yakaiswa kuti ichengete mhuka yake yemagetsi. Rossi yakabatwa isina mahembe mumifananidzo yakawanda, ichiratidza turtle tattoo yake.
Nezve kusvuta uye kunwa kwaRossi tsika, haaputi uye ndiye mumwe wevamhanyi vanopesana nemubatsiri wefodya mumitambo. Iye anotarisisa anotarisa maitiro ake ekunwa sezvo ari akanyatso tarisa pakuve akakodzera kune kwake basa kwaanoedza.
Thanks for reading vedu Valentino Rossi Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!